ယူနိုက်တက်ရဲ့ အံ့ဖွယ် comeback အပေါ် အမြင်မတူပဲ အ​ခြေအတင်ဖြစ် စကားများခဲ့ကြတဲ့ ပေါလ် စခိုးလ်နဲ့ ဖာဒီနန် - xyznews.co
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီနေ့ နံနက်မှာတော့ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းထဲမှာ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဥ်3အဖြစ် စီးရီးအေ ကလပ် အတ္တလန္တာ အသင်းကို ဧည့်ခံ ကစားခဲ့ရပြီး3–2ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ကာ အမှတ်ပေး ဇယားကို ဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ခံစစ်် ကစားသမားတွေရဲ့ အမှားတွေကြောင့် ပွဲချိန် မိနစ် 30 အတွင််းမှာပဲ2ဂိုးအထိ ပေးခဲ့ရပြီး ပထမပိုင်း အတွင်းမှာပဲ2–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ် ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ပွဲချိန် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ မက်ဂွားယား ၊ စီရော်နယ်ဒို တို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အတူ အံ့ဖွယ် comeback နိုင်ပွဲမျိုး ပြန်လည် ရယူနိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ရလဒ် ဆိုးရွားနေမှုတွေကို ရပ်တန့်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဥ် အပြီးမှာတော့ ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် ကစား သမားဟောင်း နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ ပေါလ် စခိုးလ် နဲ့ ရီယို ဖာဒီနန် တို့က ပထမပိုင်း နဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှ အသင်းဟောင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပေါ် အမြင်မတူ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး စကားတွေ အခြေအတင် ပြောခဲ့ကြပါသေးတယ် ။
စခိုးလ် : အကယ်လို့ အသင်းတစ်သင်းက အိမ်ကွင််းပွဲမှာ ပထမပိုင်း ကစားပြီး2–0ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ရှုံနိမ့် နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ ​ကောင်းလှတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထုတ်ပြောမိမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ၊ နိုင်ပွဲအတွက် အိုလီက စိတ်လှုပ်ရှား နေခဲ့တာပါ ။ ဒါက နိုင်ပွဲ တစ်ပွဲ ရခဲ့ရုံပါပဲ ။ ကျွန််တော်ကတော့ ပထမပိုင်း ကစားပုံကို မနှစ်သက်လှပါဘူး ။ အဲ့တာက ကျွန်တော့်ကို စိုးရိမ်စိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ။ အကယ်လို့ အသင်းကြီး တစ်သင်းနဲ့ အခုလို ကစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပျက်ကပ်ဆိုက်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ပွဲစဥ် မတိုင်ခင်ထဲက ဒါဟာ 4-2-4 ကစားကွက်ပါလို့ အိုလီ ပြောခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ကစားခဲ့ပါတယ် ။
အကယ်လို့ ဒီလိုပဲ ဆက်ကစားရင် ပြိုင်ဖက်ရဲ့ ဖျက်ဆီးခြင််းကို ခံလိုက်ရပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့တာဟာ အသင်းအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ချိတ်ဆက်ကစားပုံ မဖြစ်စေပါဘူး ။ ဖရက်ဒ်က ကစားကွက် ပြင်ပ မကြာခန ရောက်သွားတတ်သလို တော်မီနေးကလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုသာ ဖြစ်နေရင် ၊ ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်း ဒီလို အသင်းကို ရင်ဆိုင် ကစားတဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မလဲ ?
ဖာဒီနန် : ခင်ဗျား အနေနဲ့ ပထမပိုင်းရဲ့ နောက်ပိုင်း ကစားပုံကို ကြည့်ရပါ့မယ် ။ ခင်ဗျား မြင်ပြီးပါပြီ ၊ ဒုတိယပိုင်း ကစားပုံကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူကမှ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပြသနာတွေ ပြေလည်သွားပြီလို့ လူသိရှင်ကြား ပြောရဲဦးမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ် တစ်ဦးအနေနဲ့ ပွဲစဥ်ထဲမှ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ​ကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို ဆွဲထုတ်ယူသင့်ပါတယ် ။
ဒီလို ရလဒ်မျိုး… ဘာကြောင့်ပဲ ရနေပါစေ ၊ ဒီလို ရလဒ်ကို ခင်ဗျားလည်း လိုချင်တာပါပဲ ။ အိုလီ ကတော့ ဒီ​​နေ့ အတွက် လိုချင်တဲ့ရလဒ် ရယူခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒီပွဲမှာ အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေက အလုပ် ကြိုးစားပြီး စည်းလုံးညီိညွတ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြသနာတွေက မပြေလည်သွားသေးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အခုပွဲကိုပဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ပျော်ရွှင်ခံစားလိုက်စမ်းပါ ။
စခိုးလ် : ဒါက ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်နေမှာပါ ။ ဒါပေမဲ့ မင်း ကစားနေခဲ့တာက ဘယ်လို အသင်းလဲဆိုတာလဲ သတိရလိုက်ပါ ။ ခင်ဗျားတို့က အတ္တလန္တာ အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားခဲ့တာပါ ။ ဟုတ််ပါတယ် ၊ သူတို့ အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အတော်လေး ကြိုးစားရင်း ပွဲပြီးခါနီးမှ နိုင်ခဲ့တာပါ ။
ဖာဒီနန် : လက်ရှိ အခြေအနေ အချိန်အခါမှာ ဒါက ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတာ ခင်ဗျား သိတယ်မလား ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေက တက်နိုင်သလောက် ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ် ။
စခိုးလ် : ဒါက စနေနေ့ ပွဲစဥ် ( လီဗာပူး ) အပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှု ရှိလိမ့်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်နေပါပြီ ။ အိုလီဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အသင်းလေး တစ််သင်းကို အနိုင်ကစားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သယ်ယူရင်း တနင်္ဂနွေပွဲဆီ သွားနိုင်လိမ့်မလား ? ငါတို့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ။
သူတို့ နှစ်ဦး BT Sports ရဲ့ သတင်း သုံးသပ်ရေး အစီအစဥ်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အမြင်မတူခဲ့ပဲ အခြေအတင် ဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဖာဒီနန် ကတော့ သူတို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးကြား အချစ်တွေ လျော့ပါးသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်း သတင်းသုံးသပ််မှု အစီအစဥ်အပြီး လူမှုကွန်ယက် ဖြစ်တဲ့ တွစ်တာမှတဆင့် ပြန်လည်ရေးသား ဖော်ပြရင်း ပြေငြိမ်းစေခဲ့လိုက််ပါသေးတယ် ။
” ငါတို့ အားလုံးက စခိုလီ (ပေါလ် စခိုးလ်) ကို ချစ်ကြပါတယ် ။ အားလုံးပဲ ကောင်းသောညချမ်းလေး ဖြစ်ပါစေ ” လို့ ဖာဒီနန် က တွစ်တာပေါ်မှာ ရေးသားသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ယာဂန်ကလော့ရဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးဟာ လီဗာပူးမှာ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြင်းထန်တဲ့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ ဟာမန်း
Next Article မယ်လ်မိုကို ဂိုးပြတ်ခြေပြတ် နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှ လူစားဝင် ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် ၂ဦးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အပေါ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့ တူချယ်